ပြင်ဦးလွင် အထွက် နောင်ချို အဝင် က မင်းလှရေတံခွန်ပြင်ဦးလွင် အထွက် နောင်ချို အဝင် က မင်းလှရေတံခွန်
သဘာဝရေတံခွန်တွေကို သဘာဝအတိုင်း ခံစားချစ်ခင်သူ လူငယ်တွေအတွက် နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း ရာသီတိုင်း ရေလျော့နည်းတာမရှိတဲ့ ”မင်းလှ ရေတံခွန်” ဆီ ခေါ်သွားချင်မိတယ်။ ဘန့်ဘွေးကျင်း ရေတံခွန် မဟုတ်ပါဘူးနော်... မင်းလှ ရေတံခွန်ပါ... နေရာက သက်သက်စီ ပါ..
မင်းလှ ရေတံခွန် ဆိုတာက ပြင်ဦးလွင်အလွန် နောင်ချိုထဲမှာ တည်ရှိနေတာမို့ ပန်းကမ္ဘာမျှော်စင် တောင်စခန်းသာ မြို့တော်ဆီ အလည်သွားရင်း သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့ ရေတံခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်ခဲစွန့်စားမှုလေးတော့ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘန့်ဘွေးကျင်း ရေတံခွန် နဲ့ တစ်နာရီခန့် လမ်းလျှောက်ခရီးအကွာမှာ ရှိပေမဲ့ အနေအထားက အတော်ကွာခြားပါတယ်။ ခုလို ပြင်ဦးလွင် နောင်ချိုဘက် မိုးနည်းနေချိန် စိုက်ခင်းတွေ ရေလိုအပ်ချက်ကြောင့် ဘန့်ဘွေးကျင်း ရေတံခွန်က ရေကို စိုက်ခင်းတွေအတွက် သုံးစွဲနေရတာကြောင့် ရေတံခွန်မှာ ရေအတော်နည်းပါးနေပြီး မင်းလှ ရေတံခွန်မှာတော့ တမူကွဲစွာ ရေအားကောင်းကောင်းနဲ့ရေတံခွန်လှလှကြီး ဖြစ်နေတာကို ခံစားတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။
မင်းလှ ရေတံခွန် ကို သွားတာ ဘယ်လို ခက်ခဲတာလဲ?
မေးချင်စရာပါပဲ။ ပြင်ဦးလွင်ကနေ နောင်ချို လွယ်လိတ်ရွာလမ်းခွဲအတိုင်း ကားနဲ့ သွားပြီး ရေတံခွန်ရှိရာ တောင်အောက်ဘက်ကို ခြေလျင် ဆင်းကြရပါတယ်။ ဆင်းတဲ့အခါ တောလမ်းလေးအတိုင်း ခပ်မတ်မတ် ဆင်းကြရတာမို့ ဒူးကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းမတ်ပြီး ဆင်းကြရတာပါ။ နေရာရှာထားတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် လမ်းတလျှောက်မှာ မြေကြီးကို လှေကားထစ်သဖွယ် ခုတ်ထစ်ထားပေးလို့ ချော်သွားမှာ သိပ်စိုးရိမ်စရာ မရှိသလို၊ လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ ဝါးလက်ရန်းလေးတွေ ကိုင်နိုင်ဖို့ လုပ်ပေးထားတာ သတိပြုမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သဘာဝဆန်ဆန်ပဲမို့ အရမ်းကြီး အားယူ ကိုင်ဆင်းဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အရင်က သစ်ထုတ်တာတွေ ရှိတဲ့အတွက် ကျန်ကြွင်းနေတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတချို့ လဲပြိုနေတာတွေကို ကျော်လွှားသွားရတာမျိုးလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဆင်းကြီးပဲကို ခရီးသွားရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားပေါ် မူတည်ပြီး မိနစ် ၃၀ ကနေ ၁ နာရီခွဲ အထိ ကြာချိန် ရှိနိုင်ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ရေတံခွန်နား ရောက်ခါနီး တစ်ချက်ပါပဲ။ အတော်လေး တောင်ကို ကပ်ဖဲ့ပြီး သွားရမဲ့ နေရာလေးတချို့ရှိလို့ တကယ်ကို စွန့်စားသွားရတဲ့ ခရီးစဉ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြိုးကြီးတွေကို အားပြု တွဲခို သွားရတာကလည်း အမှတ်တရပါ။ လူငယ်နဲ့ ဖြတ်လတ်သူ လူကြီးပိုင်းတွေနဲ့ ပိုသင့်လျော်တဲ့ ခရီးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါလေး တချက် ကျော်ပြီးရင်တော့ ရေတွေ တလဟော စီးဆင်းပြီး လှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ ရေတံခွန်ကြီး နဲ့ သဘာဝတောတောင် အလှတွေကို မြင်ကွင်းကျယ် ခံစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေတံခွန် က အပြန်ဆိုလည်း အပေါ်ထိ ပြန်တက်ဖို့ရာ သက်လုံပေါ် မူတည်ပြီး ၁ နာရီခန့် ကြာမြင့်နိုင်ပါသေးတယ်။ အတက်ကတော့ အဆင်းလောက် အရှိန်ထိန်းစရာ မလိုပေမဲ့ နှလုံးအလုပ်လုပ်ချိန် ပိုများနိုင်လို့ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူတွေအတွက် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ပုံမှန်အတိုင်းဆို အဆင်းထက် အတက်က ပိုပြီး အချိန်တိုပါတယ်။
မင်းလှ ရေတံခွန် ကို ဘာကြောင့်သွားသင့်သလဲ?
သဘာဝဆန်တဲ့ ရေတံခွန်ကို မြင်တွေ့လိုသူတွေ၊ တောတွင်းခရီးစဉ် သွားလာလိုသူတွေအတွက် အတော် နှစ်သက်စရာ ဖြစ်စေလို့ပါ။ ရေကူးဖို့ နေရာတော့ မရှိပါဘူး။ ရေပန်းအောက်မှာ သင်္ကြန်ရေပက်ခံသလို ခံစားရမဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ပဲ ရေကစားလို့ရပါမယ်။ ရေများများနဲ့ သဘာဝရေတံခွန်ကို ချစ်တဲ့သူတွေ မဖြစ်မနေ သွားသင့်တဲ့ ခရီးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
ရေတံခွန်တွေအောက် ကူးလူးသွားလာတဲ့အခါ ခြေမချော်အောင် သတိပြုကြရပါမယ်။ ရေတံခွန်က တခြားရေတံခွန်တွေလို အောက်မှာ ရေကန်မရှိဘဲ၊ တန်းပြီး ဆင်းသွားတဲ့ အတွက် အထူးသတိပြု သွားလာ ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရက်သေစာ မူးယစ်သောက်စားပြီး သွားလာဖို့ အားမပေးပါဘူး။ အပျော်လာတာထက် တကယ်ကို တောတွင်းစွန့်စားရတာကြိုက်ပြီး လိုက်နာရမဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေ နားလည်သူတွေဆို ပိုသင့်လျော်တာမျိုးပါ။ ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အဖွဲ့က စောင့်ရှောက်ကူညီပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း မိမိကိုယ်တိုင်က အရေးကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးတကြီး ပြင်ဆင်လာဖို့က -
တောတွင်းစီး ဖိနပ် (ခြေမချော်စေဖို့ Sole ကောင်းတာမျိုး)
လက်အိတ် တစ်စုံ (လက်က ဘေးက အပင်၊ အကိုင်း၊ ကျောက်ဆောင်တွေ ကိုင်မိတဲ့အခါ မရှဖို့)
ရေလဲအဝတ်အပို နဲ့ ရေသုတ်ပုဝါ
ဦးထုပ် (နေပူရင် ဆောင်းဖို့)
ရေစိုခံ ဖုန်း/ ရေစိုခံဖုန်းအိတ် (ရေတံခွန်က ရေကျများလွန်းလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ရေစင်နေတတ်လို့)
တောင်တက် တောင်ဆင်း လုပ်ဖို့ ပေါ့ပါးတဲ့ အဝတ်အစား
မင်းလှရေတံခွန် သွားဖို့ ဘယ်သူ့ကို ဆက်သွယ်ရမလဲ? ဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ?
ကိုယ်တိုင်သွားဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ မင်းလှရေတံခွန်သွားဖို့ လမ်းပြကူညီပေးပြီး နေ့လည်စာ နဲ့ အဆာပြေ မုန့်နဲ့ ရေ/အချိုရည် တွေပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးမဲ့ Nature Traveler အဖွဲ့ကို ပြင်ဦးလွင်ရောက်ရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းက ၀၉ ၇၇၇ ၇၅၃၇၇၆ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ဦးလွင်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားနိုင်ပြီး ကား၊ နေ့လည်စာ နဲ့ ရေဗူး/အချိုရည်တွေ အပါအဝင်ကိုမှ ၃၅,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီတဲလေးနဲ့ တစ်ညအိပ် ခရီးစဉ်အဖြစ်လည်း သွားနိုင်ပါတယ်။ ညအိပ်တာကိုတော့ ဘန့်ဘွေးကျင်းမှာ အိပ်မှာမို့ မင်းလှနဲ့ ဘန့်ဘွေးကျင်း ရေတံခွန် နှစ်ခု အပါ ခရီးစဉ်အဖြစ် နေ့လည်စာ၊ ညစာ၊ မနက်စာ တွေ အပါ ၇၅,၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မင်းလှရေတံခွန်ကိုပဲ နေ့ချင်းပြန် သွားခဲ့တာပါ။
မင်းလှရေတံခွန်ကို ကျွန်တော် အတော် သဘောကျပါတယ်။ အနားက ဘန့်ဘွေးကျင်းနဲ့ ယှဉ်လိုက်တော့ ပိုသဘောကျမိသွားတယ်။ အန္တရာယ်များတာချင်းတော့ အတူတူလောက်ပဲလို့ ယူဆမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘန့်ဘွေးကျင်းလိုတော့ ရေလေးစိမ်ဖို့ နေရာ သိပ်မရှိနေဘူး။ ရေတံခွန်အောက် သွားမယ်ဆို နည်းနည်းလေး ခြေချော်မှာ စိုးရသလို ဖြစ်နေတာလေးတစ်ခုကတော့ သည်းထိတ်ရင်ဖိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ စွန့်စားခရီးစဉ်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေကတော့ အသည်းခိုက်နေကြမယ်လို့ ယုံတယ်။ ခရီးစဉ်အမှတ်တရအဖြစ် ရေတံခွန်က ပြန်အတက်မှာ ခြေလေးချော်ပြီး အနီးက ကျောက်ဆောင်ကို လှမ်းဆွဲမိလို့ လက်မှာ ရှသွားတာလေးပါပဲ။ Nature Traveler အဖွဲ့မှာ ဆေးသေတ္တာလည်း အဆင်သင့်ပါတော့ သိပ်စိတ်မပူလိုက်ရဘဲ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ကျွန်တော် သွားခဲ့တဲ့ တချို့ခရီးစဉ်တွေက သွားရတာနဲ့ လည်ရတာ မတန်ဘူး၊ ဒီ မင်းလှ ရေတံခွန် ခရီးစဉ်ကတော့ ပင်ပန်းရကျိုးနပ်တဲ့ ခရီးစဉ်တစ်ခုလို့ ပြောပါရစေ။
Photo :: Sai Ko (Nature Traveller), Thiha Lu Lin